Ra’iisul Wasaaraha Denmark ayaa markii seddaxaad arooskeeda dib u dhigtay si ay uga qeyb… – Hagaag.com
Ra’iisul Wasaaraha Denmark ayaa markii seddaxaad arooskeeda dib u dhigtay si ay uga qeyb…
Posted on 27 Juunyo 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Haweeneyda Ra’iisul Wasaaraha ka ah waddanka Denmark, Mette Frederiksen ayaa markii saddexaad dib u dhigtay arooskeeda, si ay uga qeyb gasho shir ay yeelanayaan madaxda dalalka xubnaha ka ah Midowga Yurub.
Kulankaas, oo ku saabsan mowduucyo la xiriira aruurinta dhaqaale looga soo kabsado saameynta cudurka Covid-19, ayaa dhici doona 17ka iyo 18-ka bisha July ee foodda nagu soo heysa.
Wuxuu noqon doonaa shirkii ugu horreeyay ee ay hoggaamiyeyaasha dalalka Midowga Yurub isugu imaadaan tan iyo markii lasoo rogay xayiraadaha lagu xakameynayay faafitaanka cudurka coronavirus.
Mette iyo saaxiibkeed
Ms Frederiksen ayaa qoraal ay Facebook soo dhigtay ku tiri: “Waxaan aad u rajeynayaa inaan guursado ninkan cajiibka ah. Laakiin sida caadiga ahba, taasi ma aha inay noqoto wax iska sahlan, shirka golaha wuxuu dhacayaa bisha July ee aan ku ballansaneyn xafladda arooska.”
Lama sheegin xilliga rasmiga ah ee uu arooskooda dhici doono.
Lamaanahan ayaa markii ugu horreysay lagu waday inay is guursadaan xagaagii sanadkii 2019-kii, laakiin waxay u baajiyeen doorashadii guud awgeed.